Ciidamada xoogga dalka oo kaabiga u saaran degmada Janaale iyo wararkii u dambeeyay - Jowhar Somali news Leader
Home News Ciidamada xoogga dalka oo kaabiga u saaran degmada Janaale iyo wararkii u...
Ciidamada xoogga dalka oo kaabiga u saaran degmada Janaale iyo wararkii u dambeeyay
Ciidamo ka tirsan xoogga dalka ayaa saacadihii la soo dhaafay gaaray deegaano hor leh oo ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo dhaq dhaqaaqa ay wadaan Ciidamadan uu ujeedkiisa yahay sidii ay ula wareegi lahaayeen degmada Janaale.
Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in ku dhowaadeen Janaale oo Al-Shabaab saldhig ku leeyihiin, waxaana laga soo xigtay in saacadaha soo socda ay gudaha u geli doonaan.
Ciidamada xoogga dalka ayaa la sheegay inay labo jiho ugu dhaq dhaqaaqeen Janaale, inkastoo aan weli la soo sheegin wax iska hor imaad ah, hadana saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in si taxadar ku jiro u socdo howlgalka ay wadaan.
Taliyaha Ciidanka dhulka Jen. C/xamiid iyo Saraakiil uu hoggaaminayo ayaa gaaray deegaanka Buufow ee duleedka Marka, halkaasoo uu kula hadlay Ciidamada ka qeyb qaadanaya howlgalka lagu qabanayo deegaanka Janaale.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in Al-Shabaab isaga baxeen Janaale, inkastoo saraakiisha ciidanka dowladda ay tilmaameen inay ka feejigan yihiin taxadarayaan dhagarta Al-Shabaab.
Degmada Janaale ayaa ka mid ah deegaanada caanka ku ah dhul beereedka, waxaa Al-Shabaab u aheyd meel muhiim ah oo ay ka soo galaan dhaqaale fara badan oo dhanka ganacsiga, waxaana degmadan muddo sanado gacanta ku hayay Al-Shabaab tan iyo markii Ciidanka AMISOM lagu weeraray, isagana baxeen shan sano ka hor.